Misoro yeNhau, 01 Chikumi 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chivabvu 31, 2019
Mazana nemazana evanhu vanoungana muWhite City Stadium muBulawayo vachionekana nemutumbi wemutungamiri weZapu, VaDumiso Dabengwa, avo vari kuradzikwa neMugovera kuNtabazinduna mudunhu reMatabeleland North.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 30, 2019
Gavhuna webhanga guru renyika, VaJohn Mangudya, vanoudza komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti nyika ine chikwereti chemamiriyoni mazana maviri emadhora kumakambani ekunze kwenyika anotengesa peturu nedhiziri ayo ari kuda kutanga abhadharwa mari dzawo.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chivabvu 29, 2019
Mutungamiri weTanzania, VaJohn Magufuli, vanoita musangano nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, mukushanya kwavo kwemazuva maviri muZimbabwe.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chivabvu 28, 2019
Mitengo yepeturu nedhiziri inokwira zvakanyanya mumagaraji kusvika pamadhora anodarika manomwe emaRTGS.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 27, 2019
Mutumbi wegamba renyika VaDumiso Dabengwa unosvika munyika nhasi vachitarisira kuradzikwa nemusi weMugovera.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chivabvu 24, 201
MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa inotanga kongiresi yayo yechishanu kubva pakavambwa bato iri muna 1999 vatsigiri vebato iri vachitsukisa nhandare yose yeAscot nezvipfeko zvebato pamwe nezvekutsigira vanhu vari kukwikwidza pakongiresi iyi.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 23, 2019
Mutungamiri weZapu, VaDumiso Dabengwa, vashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chivabvu 22, 2019
Vasungwa vashanu vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa vanopinda mudare vachitarisirwa kukumbira kupihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itonge vachibva kudzimba dzavo.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chivabvu 21, 2019
Sangano re Center for Community Development in Zimbabwe rinoti hurumende inofanirwa kubvisa muhusungwa mushandi wesangano iri, VaGeorge Makoni, pamwe nevamwe vake vanorwira kodzero dzevanhu.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Chivabvu 20, 2019
Mapurisa okanda hutsi hunokatyisa mudhorobha reHarare achirova vanhu vasina mhaka vachityira kuti vamwe vavo vange vachironga kuratidzira.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chivabvu 17, 2019
South Africa inoudza Zimbabwe kuti ive nemutongi gava anobva kunze kwenyika kuitira kuti gakava rezvematongerwo enyika riri munyika rigadziriswe. Mashoko aya anouya panguva iyo mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vatura hurongwa hwenhaurirano nevamwe vemapato.